Fianarantsoa: Ho ivotoeran'ny teknolojia
jeudi, 05 juillet 2018 10:28
Ho an'ny tetikasa "Vitatsika io" dia tsy maintsy apetraka aingana ny teknolojia avo lenta amin'ny sehatra rehetra.
1- Ozinina panneau solaire sy informatique
Ao ny fametrahana ny panneau solaire isan-tokantrano manerana ny Nosy, izay anomezana ny Malagasy rehetra panneau solaire mitentina 1 500 000 ariary, ary averina 15 000 ariary isam-bolana ao anatin'ny 10 taona, izany hoe ny faktiran-jiro dia antsasak'izay lany raha labozia no nampiasaina.
Hisy arak'izany Ozinina lehibe atsangana ao Fianarantsoa anamboatra ireo panneau solaire 4 000 000 isa ireo, hanamboatra ny kojakoja toy ny batterie, ny solosaina na ordinateur sy ireo fitaovana maro mety ilaina amin'izany.
Eo amboalohana raha mbola tsy hanana ny teknolojia, dia Ozinina manambatra ireny pièce technologique tsy ananana ireny.
2- Carte électronique
Ovaina Carte électronique ny vola eto amintsika, ahafahana mifehy ny vola malagasy, mampiakatra ny hetra, mampiditra ny rehetra amin'ny ara-dalàna, manome vary 150Kg, rano 15m3, éthanol 30litres isam-bolana, isan-tokantrano, hifampivarotana omby, hifehy ny kolikoly, hifehy ny fandriam-pahalemana.
Ao Fianarantsoa izany no anamboarana izany, handrindrana izany, hisy serveur informatique sécurisé goavana izany ajoro ao an-toerana.
3- Informatisation de l'administration
Ny asam-panjakana rehetra dia atao informatique avokoa mba hifehezana sy hanamora ny asa rehetra, na ny archives na ny asa an-davan'andro.
Atao informatique ny état-civil, ny soram-piankohonana, ny taratasy fanambadiana, ny fahafatesana, ny lisitry ny mpifidy, ka raha teraka tany Fenoarivo Atsinana, tsy voatery anenjika andeha any ireo monina any Androy.
Ny lisitry ny omby izay asiana puce dia atao informatique avokoa
Ao Fianarantsoa izany no hisy io Serveur io.
4 - Fananganana ivon-toerana fampianarana ambony sy centre busness tech
Fianarantsoa dia malaza amin'ny fampianarana informatique sy tecnologique, omena lanja lehibe izany ka hisy sekoly ambony, université goavana momba ny informatique, technologique atao ao.
Ajoro ao ihany koa ny centre business technologique hivondronan'ny mpandraharaha tanora na ny startup, toy ireny Silicone Valley ireny raha any Etats-Unis, na ireny hita any Chine na Nosy Maurice ireny.
5- Internet sy téléphonie
Avaozina tanteraka ny fifanarahana amin'ireo mpandraharaha misera momba ny internet sy téléphone, mba ho tsara ny tolotra, hanenika ny Nosy, ho mora ny vidiny ary ny sekoly rehetra, ny hopitaly, ny seranam-piaramanidina, seranam-piarakodia dia ahazo internet tsy andoavam-bola avokoa.